Philippe Coutinho Oo Saadaaliyay Kulanka Caawa Ee Barcelona vs Chelsea & Kooxda Taageerayo » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Falanqeynta/Philippe Coutinho Oo Saadaaliyay Kulanka Caawa Ee Barcelona vs Chelsea & Kooxda Taageerayo
Xidiga khadka dhexe uga cayaara Barcelona, ee Philippe Coutinho, ayaa wuxuu sheegay inuu u sacaba tumi doono kulanka ay kooxdiisa la dheeleyso caawa dhigeeda Chelsea, kaasoo wareega 16-ka Champions League, ka tirsan.
Ciyaarta labadaan koox ay yeelan doonaa ayaa waxaa ay tahay mid aysan kala cadeyn naadiga usoo bixi doonta wareega Sideed dhamaadka maadaama lugtii koowaad oo guriga Blues lagu dheelay ay 1-1 kusoo kala baxeen.
Lugta labaad oo loo balansan yahay in lagu qabto garoonka Camp Nou, oo ay ku dheesho Bluagrana, ayaa waxaa uu rajaynayaa Coutinho in kooxiisa ay hesho labinta guusha, inkastoo uu qiray inay wax walba ay dhici karaan.
“Waa kulan adag, kaasoo udhaxeeya labo koox oo waa weyn, waxaana saameyntiisa sare u qaadaya tartanka la dheelayo oo ah Champions League,” ayaa laga soo xigtay Website-ka Barca, inuu Coutinho yiri.
“Aniga had iyo goor ama mar walba, waxaan ahay mid jira dhinaca kooxdiisa, iyaga ayaana guusha urajaynayaa, waana usacaba tumi doonaa, taageerayaasha ayaan barbar istaagi doonaa,” ayuu ku daray hadalkiisa.
“Kani waa kulan udhaxeeya labo koox oo waa weyn, Chelsea lugtii koowaad, wax fiican ayay sameysay, waxaana rajeynayaa inaan usoo baxno wareega xiga, caawa waxaan ahay taageere Barcelona ah,” ayuu hadalkiisa kusii xiray.
Barcelona vs Chelsea Champions League Philippe Coutinho
RONALDO ayaa si cad u fahamsan kooxda uu doonayo Gareth Bale